Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseTaiwan eziQhekezayo » I-Taiwan ilungiselela ukufika kweNkanyamba enkulu uChanthu
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Icandelo lokungenisa izihambi • iindaba • Safety • Iindaba zaseTaiwan eziQhekezayo • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba ezahlukeneyo
Izibuko laseNanfang'ao lixinene ngamaphenyane-ifoto ngoncedo lwe-CNA
I-Super Typhoon-uChanthu-wenza umda eTaiwan kwaye kulindeleke ukuba enze hit ngqo eTaipei ngomso, ngoMgqibelo, nge-11 kaSeptemba 2021.
I-Super Typhoon okwangoku inemimoya ephezulu egcinwe kwi-180 mph ukuyenza isahlulo sesi-5.
Indlela yeChanthu iyikhokelela ngqo eTaiwan nakwisixeko saseTaipei.
Izaqhwithi zase-Atlhough ziqhelekile kwilizwe, kulindeleke ukuba esi saqhwithi sizise umoya kunye nemvula enamandla, ibangele izikhukula kunye nokubakho komhlaba.
U-Chanthu unamandla amakhulu kunye nemimoya ephezulu egcinwe kwi-180 mph, eyenza ukuba ibe yingozi yesiqhwithi sesi-5. I-Meterologists ijonge ngononophelo iTyphoon Chanthu ngakumbi kuba ayiphelanga nje kwaphela kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo, kodwa iya isiqinisa.
Uqikelelo lwexesha elizayo ukuba uChanthu uza kutyhafa kwinqanaba lesi-4 ngaphambi kokuba liye emazantsi eTaiwan. Udidi lwesine lwesaqhwithi. Ngexesha lokudlula kwesaqhwithi kufutshane nesixeko saseTaipei, kulindeleke ukuba yehliselwe kwinqanaba lesibini lesaqhwithi.
INkanyamba enkulu uChanthu iza kuzisa imimoya ephezulu kunye nemvula enzima kuwo onke amabakala, ukusuka kwi-5 ukuya kwi-2. Iindubhu ziyinxalenye yesiqhelo eTaiwan, nangona kunjalo, uChanthu uthatha indlela engaqhelekanga ethatha kulo mmandla ngokubanokwanda kwamathuba amaninzi umonakalo. Izantyalantyala zemvula zinokubangela izikhukula kunye nokudilika komhlaba.
Kwisithuba seentsuku ezi-2 kuphela, umoya ozinzileyo unyuke nge-130 mph. Zintlanu kuphela ezinye izivunguvungu ezirekhodishe ukunyanzeliswa okukhawulezileyo, zisuka kuxinzelelo ukuya kwinqanaba lesi-5 ngexesha elifutshane kakhulu, utshilo uSam Lillo, ugqirha wemozulu Ulawulo lwe-Oceanic kunye ne-Atmospheric Administration (NOAA).
Ngokweziko leNkanyamba laseMelika, ukomeleza ngokukhawuleza kuchazwa njengokunyuka kwemimoya ephezulu egcinwe ziikhilomitha ezingama-35 ngeyure kwiiyure ezingama-24. Ezinye izithako eziphambili zokuqinisa ngokukhawuleza kwenkanyamba zibandakanya amaqondo obushushu aphakamileyo elwandle, umxholo wobushushu bolwandle (umlinganiso wobushushu bamanzi ngaphantsi komphezulu), kunye neshear yomoya emileyo ethe nkqo.
Amanzi afudumeleyo ahamba kunye nomoya ofudumeleyo ofumileyo, kwaye zombini zibonelela ngamandla kunye nokufuma kwinkanyamba. Ukucheba komoya nkqo ngumahluko kwisantya nakwindlela eya emazantsi kunye nomoya okwinqanaba eliphezulu. I-shear ephezulu ikrazula iincopho zophuculo lwenkanyamba kwaye ibenze buthathaka, ngelixa ischey esezantsi ivumela izivunguvungu ukuba zakhe.
I-Central Weather Bureau (i-CWB) iqikelela ukuba njengoko isiphepho sivalela eTaiwan, isiphelo sayo siza kuqala ukuba nefuthe kwilizwe langoLwesihlanu ngokuhlwa, lizise imvula kwimpuma yeTaiwan. Imvula nomoya uza kuqina ngoMgqibelo, xa kusenokwenzeka ukuba kune imvula enkulu kwimpuma yeTaiwan, kwisiXeko saseKeelung, nakwiPeninsula yaseHengchun. Inkqubo ye- IsiThaiese bazilungiselela kangangoko banako, namashishini nezikolo zivaliwe kulindeleke ukufika kwesitshingitshane.